Johnson: Tsy misy pasipaoro COVID ho an'ny UK
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » Johnson: Tsy misy pasipaoro COVID ho an'ny UK
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Izay rehetra tonga any Angletera dia tokony hampandre ny manam-pahefana ny amin'ny fitsidihana ireo firenena ao amin'ny "lisitra mainty" any UK, izay misy ny toe-javatra misy ny COVID-19.
Tsy hampiditra pasipaoro COVID ao amin'ny firenena ny manampahefana anglisy
Ny fampidirana pasipaoro COVID dia hiteraka fepetra tsy fitoviana sy fameperana
Ny governemanta UK dia nametraka fepetra henjana vaovao hanoherana ny valanaretina coronavirus
Ny praiminisitra anglisy Boris Johnson dia nilaza fa ny manampahefana ao amin'ny Fanjakana Mitambatra dia tsy hampiditra ny 'pasipaoro COVID' ao amin'ny firenena.
Araka ny tatitra teo aloha, ny tolo-kevitra toy izany dia nataon'ny orinasam-pitaterana sy fitaterana tany UK teo aloha, izay manantena fa hampitombo ny fizotry ny fizahan-tany izany ary hamerina amin'ny laoniny ny orinasa voakasiky ny Covid-19 areti-mifindra.
Araka ny lazain'i Johnson, ny fampidirana ny 'pasipaoro COVID' dia hamorona fepetra tsy fitoviana sy fameperana.
Nankasitraka ny fandraisana anjaran'ny mpahay siansa, dokotera, ny tafika ary ireo mpilatsaka an-tsitrapo izay nanampy tamin'ny fiantohana ny hafainganana haingana amin'ny vaksiny eto amin'ny firenena ny praiminisitra ary niantso ny mpiray tanindrazana hanao vaksiny manohitra ny coronavirus ihany koa.
Ny sampan-draharahan'ny fahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy any UK dia nitatitra ny fanatanterahana ny tanjona napetraka tamin'ny fiandohan'ny vaksiny - hanome vaksiny olona 15 tapitrisa atahorana ho voan'ny coronavirus amin'ny tapaky ny volana feb.
Raha ny filazan'i Boris Johnson dia hanolotra drafitra hanonganana ny firenena amin'ny fikatsoana ny governemanta amin'ny 22 febroary. Na izany aza, nampitandrina ny praiminisitra fa miadana sy miadana ny fiverenan'i Angletera amin'ny ara-dalàna.
Talohan'izay dia nanambara ny sekreteram-panjakana misahana ny fahasalamana sy ny sosialy any UK, Matthew Hancock, fa hisy fepetra henjana ho an'ny governemanta hiadiana amin'ny areti-mifindra coronavirus.
Izay rehetra tonga any Angletera dia tokony hampandre ny manam-pahefana ny amin'ny fitsidihana ireo firenena ao amin'ny "lisitra mainty" any UK, izay toerana misy ny fitsikerana ny raharaha COVID-19.
Raha tsy mahavita mitory ny fitsidihany any amin'ny firenena toy izany ny olona iray, dia mety hiatrika sazy an-tranomaizina hatramin'ny 10 taona.